DAAWEYNTA TOPINAMBUR: BEERASHADA IYO XANAANEYNTA XILLIGA XAGAAGA - ROOT KHUDAARTA
Ugu Weyn Ee Root khudaarta
Sida loo koro topinambur, beerashada pear dhoobo ah ee dalka
Jerusalem artichoke - warshad dilka ah, aad u la mid ah baradho si fiican loo yaqaan. Waxay ku noolaaneysaa si wanaagsan xaaladaha cimilada, ma aha mid picky ah oo ku saabsan daryeelka, siinayaa goosashada weyn. Jerusalem artichoke waxaa si weyn loo yaqaan ee kariska iyo daawada ay faa'iido, bogsiinaya guryaha. Maqaalkani, waxaad baran doontaa faa'iidooyinka dhirta, siduu Yeruusaalem ushaqaysto reproduce, iyo sidoo kale xeerarka aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelidda farshaxanimada Yeruusaalem.
Jerusalem artichokes: sharaxaad
Dhirta Beeralayda Yeruusaalem waxay u egtahay sida baradho, iyo afkoda - on gabbaldayaha. Dadka reer Jerusalem ayaa sidoo kale loo yaqaan 'pear earthen' sababtoo ah dhadhanka macaan iyo miraha casiir leh. Waqooyiga Ameerika waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay.
Warshadda dhererku waxay gaari kartaa afar mitir. Aad ayay u fiicantahay in la daawado bloom topinambur. Ubaxoodu aad buu u egyahay madaxda gabbaldayaha, laakiin waxay ku yar yihiin cabbirka. Ubaxa wuxuu leeyahay ur wacan. Nidaamka asaasiga ah waa mid awood badan, waxaana matalaya digriiga la cuni karo. Miraha waa qaabka qaababka, waxay yeelan karaan midab madow, jaalle ah, cad, midab madow. Cabbirka hal tubun waa kala duwan yahay 20 ilaa 300 g.
Warshad waa wax aan qabyo ahayn, oo aan dalbanaynin ciidda (waxay qaadataa xidid xitaa carrada inferiil), waxay bixisaa goosashada wanaagsan. Muuqaal kale oo fiican oo dhaqanka ah waa in ay aad u adkeyso cudurada iyo cayayaanka. Sidaa darteed, taranta Jerusalem artichoke uma baahna lacag iyo waqti badan. Dhinaca kale, caleemaha iyo miraha geedka waxay leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh, sidaa daraadeed waxaa loo isticmaalaa daawada.
Miraha geedka waxaa loo tixgeliyaa cunto, maadaama aysan ku jirin dufanka iyo astaamaha dufanka leh. Qiimaha kalooriga ee 100 g ee badeecaddu waa 73 kcal oo keliya. Waxaa ku jira wax gram ah oo kolesterool ah. Qiimaha nafaqada ee badeecada waa potassium, carbohydrates, sodium, fiber iyo sonkorta (kaliya 10 g halkii 100 g oo miro). Topinambur ayaa sidoo kale ku jira inulin. Sababtoo ah ka kooban tan, miraha dhaqanka waxaa lagu talinayaa isticmaalka sonkorowga, dadka u baahan cunto.
Waxaa intaa dheer, dhirtu waxay leedahay quwad fara badan oo fitamiin ah:
fitamiin B6 iyo B12;
Maaddaama ay ka kooban tahay, Jerusalem artichokes waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqanka si loo yareeyo sonkorta dhiigga ee sonkorowga, caadiyan cadaadiska dhiigga ee bukaanka aadka u daran, nadiifiso beerka, iyo caadiyan nidaamka dheef-shiid kiimikaadka. Caleemaha artichoke Yeruusaalem ayaa aad waxtar u leh in laga saaro cusbada jirka, ka soo saaridooda waxaa sidoo kale loo isticmaalaa wax soo saarka daaweynta gabaadka.
Ma taqaanaa? Jerusalem artichoke ayaa la ogaaday muddo dheer ka hor soo jeedda baradho. Wuxuu bilaabay inuu koro oo cuno qabaa'il Indian ah. Magaca dhaqanka wuxuu ka yimid magaca qabiilka "tupinambos". Iyada oo ay soo ifbaxday baradho, xiisaha geedka ayaa si weyn hoos ugu dhacay. Maanta waxaa laga heli karaa beeraha sida dhirta ornamental.
Sida loo abuuro topinambur: xulashada ciidda iyo meesha
Jerusalem artichokes waa wax weyn oo ku soo koraya dalka. Warshadu waxay ku horumarin kartaa loamy, boodh, carrada dhoobo. Uma baahnid daryeel gaar ah, wuxuu ku noolaan karaa inta lagu jiro abaarta, iyo sidoo kale maqnaansho kasta oo kormeer. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in aad hesho goosashada qani ku ah, waa inaad raacdaa xeerarka aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelidda dalagga. Hoos waxaa ku xusan in aan ka fekereyno sida kor loogu qaadi karo farshaxanka dalka ee dalka, si ay dhirta kuugu farxaan aad u weyn, digriiga dhadhan fiican leh.
Sida loo helo goosashada quruxda badan ee Jerusalem artichokes: doorashada ee meel si ay u beeri
Si digriiga ah ee dhirtu si fiican loo aasaasay, meel loo beeray Jerusalem artichokes waa inay doortaan iftiinka. Waxaad sidoo kale soo qaadan kartaa sawir leh shoog yar. Ha dhigin geedka meel u dhow dalagga beeraha hooseeya. Marka cawska Yeruusaalem koraan (oo waxay gaari karaan afar mitir), dhirta hoose waxay noqon doontaa hooska.
Waa muhiim! Laguma talinayo in lagu beero geedka qorraxda tooska ah. Waxay u hanjabtaa midhaha si ay u yaraadaan oo aanay macaan ahayn.
Sida laga soo xigtay shuruudaha dalagga dalagga, waxaa laguma talinayo in la beero Jerusalem artichoke ee meesha meesha strawberries dhawaan la koray, iyo sida kale. Waxaa ugu wanaagsan dhamaantood, warshadu waxay la socotaa deriska sida hadhuudhka, baradhada, raspberries, currants. Kuwa ugu fiican ee ka mid ah geedaha waa baradho, qajaarka, kaabajka. Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo qodobka ay Jerusalem artichoke si buuxda u cufan ciidda leh maaddooyin wax ku ool ah, ka saaro cusbada. Sidaa darteed, si loo soo celiyo guryaha bacrin ah ee ciidda, artichoke Yeruusaalem waxaa badanaa lagu beeray meelaha meelaha gabbaldayaha iyo dalagyada kale ee culus ee dhulka la koray. Si kastaba ha ahaatee, xaaladahaas, ha filanin goosashada qani ku ah.
Miyuu jiraa dalbashada ciidda?
Jerusalem artichoke uma baahna ciidda. Waxay ku kori kartaa nooc kasta oo carrada ah, xitaa infertile. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in aad hesho goosashada qani ku ah, waa inaad diirada saartaa doorashooyinka dalagga. Best of dhan loogu talagalay beerto digriiga ku haboon loamy, carrada dabacsan. Wixii beeridda ee heer aad u weyn waa inay doortaan ciidda bacrin ah. Ha qorsheynin inaad ku beerato carrada culus iyo milixda cusbada.
Ka hor inta beerto ciidda waa in la diyaariyaa. Haddii beeritaanka la qorsheeyay xilliga guga, dayrta dhulka ayaa qodaya ilaa qoto-dheer ee waraaqda majarafad oo ku dar wax yar oo compost ah. Inta lagu jiro qotominta naaska ee dhulka ma jebin, waxaa ugu fiican ee la sameeyo guga. Inta lagu jiro beeritaanka dayrta, ciidda waa la qodayaa saddex wiig ka hor geedi socodka beerto.
Ma taqaanaa? Haddii aad rabto in aad gaaro dhalidda ugu badan, ka hor beerto, isku daraan ciidda leh Bacriminta fosfat-potassium (dhibco qalalan, cunto lafo). Qof kasta waa la iloobey marka qashin tuubo uu soo baxayo sanadka soo socda. Si loo yareeyo aagga koritaanka dhaqanka ee warshadda waxaa lagu beeray weelasha.
Kala saarista Jerusalem artichoke: sida loo abuuro digriiga of pear earthen
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso waxa jilicsan ee Jerusalem artichokes. Jawaabta su'aashan waa mid aad u fudud. Artichokes Yeruusaalem ayaa koray by faafinta daaqsinka - digriiga, sida baradho caadiga ah. Beerto, digriiga caafimaad leh ayaa la xushay (oo aan lahayn calaamado kallana iyo waxyeelo dibadda) ee dhexdhexaad ah (ilaa 40 g). Beerto waxaa badanaa la sameeyaa guga, dhammaadka Abriil. Si kastaba ha ahaatee, beerto waxaa la samayn karaa xilliga dayrta (dhamaadka October - bilowgii November), tan iyo geedka waa baraf u adkaysta. Harvest waxaad heli doontaa sanadka soo socda.
Si loo sameeyo digriiga si wanaagsan loo abuuro, waa lagama maarmaan in la raaco fogaanta 60 ilaa 80 cm inta u dhaxeysa sariiraha, iyo 30 ilaa 40 cm sariiraha u dhexeeya godadka. oo ku shub isku dar ah ee digriiga.
Waa muhiim! Haddii dhirta ballaadhan ee Jerusalem artichoke loo qorsheeyay, waxaa ugu wanaagsan in la qodo maaha godadka, laakiin waxay ku darsamaysaa ilaa 12 cm qoto dheer, digriiga waa in la dhigaa 40 cm oo ka duwan midba midka kale. Si aad u sameysid dabka, waxaad isticmaali kartaa tartan.
Laga soo bilaabo beeritaanka digriiga si ay u soo baxaan baasas bil ah, iyo goosashada waxay dhacdaa shan ilaa lix bilood.
Sida loo daryeelo artichoke Yeruusaalem
Haddii caqabaddu tahay in la helo dalag hodan ah iyo digriiga tayada sare leh, ha ku kalsoonayn xaqiiqda ah in dhirta aysan u baahnayn daryeel gaar ah waxayna ku noolaan kartaa xaaladaha "Spartan". Shuruudaha daryeelka caafimaad ee saxda ah ma aha wax badan. Si kastaba ha ahaatee, ilaalintooda ayaa ku farxi doonta bacriminta aan caadiga ahayn iyo dhadhanka miro-dhiska. Intaa waxaa dheer, daryeelka saxda ah ayaa ka ilaalin kara artichoke Yeruusaalem ka timaadda cudurrada iyo cayayaanka.
Qaababka Noocista pear dhoobo ah
Jerusalem artichoke ma dalbanayso qoyaan iyo adkaysi u ah abaaraha. Waraabinta pear earthen, kaas oo lagu beeray dhul furan, waa in ay ahaataa oo kaliya xaaladaha aan roob lahayn muddo dheer. Haddii digriiga lagu dhex daro weelasha, waraabin dhexdhexaad ah ayaa la sameeyaa toddobaadkii hal mar iyo badh. Marnaba ma dhacdo inaan daadinno ciidda. Waxaa fiican inaad subaxda ama fiidkii biyo ku cabto. Heerkulka biyaha ugu fiican waa 15 ° C.
Waa muhiim! Ku waraabinta topinambur waa in aan la sameynin haddii celceliska heerkulka cimiladu maalin kasta ka hooseeyaan 15 ° C.
Dharka ugu sareeya ee girasol
Ciidda bacriminta waxaa lagu fuliyaa saddex marxaladood:
compost inta lagu guda jiro ciidda carrada;
Bacriminta fosfate ee fosfat inta lagu jiro beeritaanka;
bacriminta macdanta ee muddada sii deynta ee burooyinkeeda.
Bacriminta fosfooraska-potash ugu wanaagsan ee ciidda Jerusalem artichoke waxaa ka mid ah digada qalalan iyo lafaha cuntada. Warshadu waxay si fiican uga jawaabtaa Bacriminta organic iyo macdanta. Phosphorus, potash, Bacriminta organic waxaa la isticmaalaa inta lagu guda jiro beeridda, Bacriminta nitrogen - guga. Bacriminta dabiiciga ah waxaa la isticmaali karaa mar labaad labadii sano, iyo Bacriminta macdanta ayaa lagula talinayaa in la bacrimiyo sanad walba.
Daryeelka ciidda iyo jaridda dhirta
Dhirta geedaha ee haramaha waa mid ka mid ah shuruucda ugu muhiimsan ee daryeelka pear earthen. Horta dhirta ugu horreysa waa la fuliyaa marka ay udububku si muuqata u muuqanayaan si aan loo jahwareerin haramaha. Pear dhoobo wuxuu jecel yahay carrada dabacsan, sidaas darteed haraaga joogtada ah ayaa faa'iido leh ma aha oo kaliya in la nadiifiyo haramaha, laakiin sidoo kale loogu talagalay wareegga hawada ee dhulka. Weed ciidda waa in ay si taxadar leh u noqotaa, si aanay u waxyeeleynin asalka joqraafiga Yeruusaalem.
Ma taqaanaa? Cuntada badan ee haraaga, waa weyn waxay noqon doontaa digriiga artichoke Jerusalem. Ka dib markii dhalaalaya, dhirta waxaa lagu talinayaa in ay kufsadaan, iyo dhexda dhexe ee xilliga daaqsinka gooyaa afartan iyo mitir nus ah. Tani waxay keeni doontaa goosashada qani ku ah.
Cudurada iyo cayayaanka Jerusalem artichoke
Cayayaanka Earth u adkaysta dhammaan noocyada cudurada iyo cayayaanka. Si kastaba ha noqotee, sida geedka kale, waxay ku xiran tahay iyaga. Inta badan, dhibaatadu waxay dhacdaa marka gebi ahaan xadgudub ku ah xeerarka daryeelka ama beeritaanka carrada faddaraysan ama meel u dhow dhirta cudurka qaba.
Caleemaha cad waa cirbadda ugu badan ee cudurka ku dhaca. Waxay inta badan saameysaa warshadda leh qoyaanka ciidda xad dhaafka ah. Lagu soo bandhigay ubaxyada cad ee on afkoda. Kiisaska ugu sareeya, kobaca madow waxay bilaabaan inay muuqdaan gudaha gudaha. Haddii calaamadaha noocan ah la ogaado, waa in dhirta ay saameeyeen ay tahay in la saaro oo la gubo iyadoon la daahin. Kareemada budada ayaa laga yaabaa inay ku muuqato geedka qaybta labaad ee xilliga sii kordhaya. Waxaa lagu muujiyey ubaxyada cad ee korka caleemaha. Waqti ka dib, weerarku wuxuu soo iibiyaa midab madow. Cudurku waa natiijo ah abaar ama isbeddel deg-deg ah oo heerkul ah. Si loola dagaallamo cudurka, Jerusalem artichoke waxaa lagu daaweeyaa fungicides (tusaale, "Skor", "Topaz").
Waxaa ka mid ah cayayaanka on artichoke Yeruusaalem waxay gelin kartaa slugs indhaha iyo medvedka. Cayayaankaasi waxay cunaan digriiga. Si loola dagaallamo slugs agagaarka dhirta, granules gaar ah ayaa la dhigay. Si looga hortago digriiga inay waxyeello u geysteen qashinka iyo dirxiga Mujaahid, Foxin ama Diazinon ayaa lagu aasaa ciidda ka hor intaan la beeri.
Waa muhiim! Jooniska budada badanaa wuxuu keenaa in ka badan bacriminta nitrogen ee ciidda. Sidaa darteed, waa in loo isticmaalo si khaas ah.
Isu ururinta Yeruusaalem artichoke
Naxariistii geedka ayaa ku jirta xaqiiqda ah in goosashada la samayn karo xilliga dayrta iyo guga. Xilliga dayrta, waxaa fiican in la sameeyo bartamihii October, iyo guga - ka dib barafka dhalaalayaa. Digriiga la doorto guga ayaa ku habboon beeritaanka cusub. Waxay ka kooban yihiin sonkor ka badan kuwa la ururiyey xilliga dayrta.
Digriiga ka tagay jiilaalka waxaa si fiican loo dhawray ciidda. Waxay u adkeysan karaan dhaxan 40 digrii oo dhaxan. Xilliga jiilaalka, geedka afkoda ayaa la jarjarey heer ka mid ah 15 cm dhulka, digriiga waxaa lagu daboolay caws, caleemo qallalan iyo jarjar afkoda. Ha degdegin inaad gooyso geedka, waqtiga ugu fiican ee tani waa bisha November. Ilaa arrimahan, Jerusalem artichoke waxay nuugaysaa waxyaabo waxtar leh oo ka soo jeeda dhulka.
Digriiga ka tagay dhulka ayaa isku kicin kara sanadka soo socda. Si kastaba ha noqotee, waxsoosaarka wanaagsan, waa in la qodo oo loo xushay sidii loo beeray tijaabada ugu fiican.
Waa muhiim! Haddii afkoda la goynayo goor hore jiilaalka, tani waxay yareyn doontaa dhalidda iyo cabbirka digriiga in aad ku qodi doonto guga.
Ka ilaalinta artichoke Yeruusaalem ayaa si fiican loo qabtaa meel qabow. ujeedadan awgeed, dhulka hoostiisa ama aagga cusub ee qaboojiyaha waa mid qumman. Heerkulka diiran, digriiga si dhaqso ah ayuu u burburin doonaa oo ka sii dari doonaa. In la ogaado waxa pear dhoobo ah, waa maxay hantida faa'iido leh yihiin, sida dhirta pear earthen soo saara, xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka, goosashada iyo sida loo kaydiyo Jerusalem artichoke xilliga qaboobaha, aad si sahlan u koraan karaa in aad gaar ah.
Noocyada ugu wanaagsan ee yaanyo adkaysi u leh dabaylo goor dambe
Wax kasta oo ku saabsan Zagorskaya Salmon Breed Chicken: sharaxaad, astaamo, sawirro
Indian Chrysanthemum: beerashada iyo daryeelka
Goobidda iyo daryeelka ee lupine ubax aan caadi ahayn
Tiarella: mid ka mid ah dhirta ugu wanaagsan ee koraya ee hooska
Waxaa ka mid ah dhirta qalaad ee lagu beeray dhirta gudaha ah, waxaa jira inta badan noocyada daryeelkooda iyaga oo guriga jooga ay adag tahay oo aanad awood u lahayn. Laakiin kor ku xusan ma khuseeyaan sinodenium, haddii kale waxaa sidoo kale loo yaqaan geedkii jacaylka. Qeexidda Wakiillada jinsiga Sinadenium (Sinadenium) ayaa dabiiciyan laga helaa koonfurta iyo bariga Afrika. Read More
Boorashka hore iyo aad u dhalaalaya "Eurasia 21"
Ma suurtagal in la qaato kaabajka Peking ee duubka halkii aad ka cuni lahayd rootiga pita? Roodhiga suxuunta sawirada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Root khudaarta 2019